Xafiiska QM ee gobolka Hiiraan oo halis ugu jira in albaabada loo laabo (Sababta Akhriso) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xafiiska QM ee gobolka Hiiraan oo halis ugu jira in albaabada loo laabo (Sababta Akhriso)
Xafiiska Qaramada Midoobay ee gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada B/weyne ayaa halis ugu jira in la xiro, kadib markii kulan lagu dhaliilay xafiiskaasi ay maaanta magaaladaasi ku yeesheen wasiiro ka tirsan maamulka Hirshabeele iyo mas’uuliyiinta gobolka Hiiraan.
Mas’uuliyiinta xafiiska QM ee magaalada B/weyne ayaa la sheegay iney ka dhego adeegeen iney la kulmaan madaxda maamulka Hirshabeele, sida wasiirada iyo madaxweynaha maamulkaasi.
Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan oo kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay in dhibaato badan ay ku qabeen ka maamul ahaan xafiiskan, maadaama aanu shaqadii la rabay u qabaneyn shacabka Hiiraan.
Waxa uu tilmaamay in arrin wanaagsan ay tahay in guud ahaan maamulka Hirshabeele ay wada arkaan caqabadaha xafiiska UN ee magaalada B/weyne.
Mahad Xasan Cismaan oo ah wasiirka warfaafinta maamulka Hirshabeele ayaa isna dhankiisa sheegay in aan laga aqbali doonin quursiga ay wadaan hay’adaha UN ee Hiiraan, haddii aaney isbedal degdeg ah sameynna go’aan laga gaari doono.
“Xiriirka meesha uu hadda marayo waa uu ka xumaan doonaa, annaga oo wasiiradii ah ayaa ka dalbannay kulan heer madaxweyne ah iney nala qaataan wax jawaab ahna nama soo siin, sidaasi darteed waxaan u sheegayaa madaxda UN-ka ee Hiiraan in madaxweynaha uu go’aan soo saari doono haddii aan jawaab degdeg ah idin ka weynno” Sidaas waxaa yiri wasiirka warfaafinta Hirshabeele Mahad Xasan Cismaan.
Dhinaca kale, weli ma jirto cid u hadashay xafiiska QM ee gobolka Hiiraan, waxaana dhaliishaan ay imaaneysaa xilli marar badan hay’adaha UN-ka lagu dhaliilayey waxqabad la’aan.